China Cast သံဖရိန် မော်ဒယ် ED10 အင်ဂျင်ဘလောက် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |Zhengheng
မော်ဒယ်- ED10 ဘောင်အောက်
လျှောက်လွှာပုံစံ- Great Wall Wind Jun ပစ်ကပ်ထရပ်ကား၊ Great Wall သေနတ်ပစ်ထရပ်ကား
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်အချက်များ- တစ်ဦးချင်းစီထုပ်ပိုးခြင်း + ကြမ်းပြင်သေတ္တာ;215cm * 185cm 20 pieces/case
Framework Cast အတွက် သွန်းသောသံ
Framework တွေချပြီးရင် process material
Zhengheng Power မှထုတ်လုပ်သော သွန်းသံဘောင်ကို Great Wall picard feng Jun နှင့် Great Wall gun series အတွက်အသုံးပြုသည်။ဖရိန်သည် အင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက်နှင့် ဆီဒယ်အိုးကြား ချိတ်ဆက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် crankshaft ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဆလင်ဒါဘလောက်၏ အောက်ပိုင်းကို ပိတ်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်ဘောင်၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကို လက်ကားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းသုတေသနပြုခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ဖြင့် အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးနှင့် ပေးပို့ချိန်ကိုသေချာစေရန် ကုမ္ပဏီသည် ကောင်းမွန်သောယုံကြည်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ ထိရောက်မှုမြင့်မားသောနိယာမကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်ဝယ်ယူရေးကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်၊ ဝယ်ယူရေးစက်ဝန်းကို တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်စေရန်၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို တည်ငြိမ်စေရန်၊ ဖောက်သည်များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စောင့်မျှော်ပါ။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထုတ်လုပ်မှု အတွေ့အကြုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစုများ စုစည်းမှုဖြင့် သံ၊ သံ၊ သွန်း အလူမီနီယံ အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် အခွံ၊ ဖရိန်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အမျိုးအစားအားလုံးကို အာရုံစိုက်ပါသည်။
1. မူရင်းထုပ်ပိုးမှု- 1PC/piece၊ 30 pieces/box (ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်၍ အရေအတွက်)ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း + ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာ
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ခိုင်ခံ့သောထုပ်ပိုးမှုသေချာစေရန် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းများကို ပြင်ဆင်ရန် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရှိသည်။
1. ဘောင်ကွက်- ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းရှိပါက ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် 15-20 ရက်အတွင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
2. Frame စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း- နမူနာပုံများကို တရားဝင်ရရှိပြီးနောက် 30-65 ရက်အတွင်း ပေးပို့ပါမည်။(တိကျသောထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်.)
4. အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရာတွင် သင့်အား ကူညီရန် ကာစတန်သံအစိတ်အပိုင်းများ၊ အလူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းကိရိယာများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ယ်ယူခြင်း။
5, အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ, အရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှု, ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အချိန်မီပေးပို့ရန်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ ရောင်းအားကောင်းတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အရေးကြီးသော ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောတရားမှာ "သမာဓိပထမ၊ အရည်အသွေးပထမ" ဖြစ်သည်။သင့်အား အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စံပြထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။အနာဂတ်တွင် သင်နှင့်အတူ win-win စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တည်ထောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် မျှော်လင့်ပါသည်။
ယခင်- 7H ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဆလင်ဒါခေါင်း
နောက်တစ်ခု: အလူမီနီယမ်အင်ဂျင်ဘလောက် H15T
အင်ဂျင်ပန်ကာသည် အလူမီနီယမ် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။